Tag: mmepe wordpress | Martech Zone
Tag: mmepe wordpress
Ọfọn, ọ dịtụla anya kemgbe m kesara ụfọdụ ndụmọdụ na mmemme na WordPress. N'oge na-adịbeghị anya, alaghachila m n'oche bench maka itinye ndị ahịa anyị niile na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịlaghachi n'ime ihe. O nwere ike ịbụ na ị hụla njikọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ọhụrụ na saịtị ahụ - nke ahụ bụ ọrụ na-atọ ụtọ! Taa, enwere m okwu dị iche. Ọtụtụ ndị ahịa anyị nwere bọtịnụ etinyere site na nne na nna